अनि बल्ल भगवानले भन्ने थिए कि, "मनुष्य म खुशी भए, तथास्तु"
१३ श्रावण २०७७, मंगलवार २१:०४
मनोज घिमिरे – हाम्रो धर्मिक ग्रन्थ अनुसार श्रावण अर्थात् साउन महिना पवित्र तथा आदिगुरु भगवान् शिवको प्रिय महिना मानिन्छ । त्यसैले श्रावण महिनाको हरेक साेमबार शिवलाई खुसी पार्न विशेष धार्मिक अनुष्ठान एवं रुद्राभिषेकका साथै व्रत बस्ने गरिन्छ। हुन त यस महिना मात्र नभई प्राय हरेक महिनाकाे मुख्य बारहरूमा हामी मन्दिर जाने गछाैं।
मेरो घर नजिकै एउटा मन्दिर छ । पूजाआजा गर्दा पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेर मुख्य पर्व पर्ने दिन हामी सपरिवार मन्दिर जान्छौं। मन्दिरमा हरेक दिन भगवानकाे मुर्ती र हामीलाई टीका लगाइदिने पूजारीले भर्खर आफ्नो पेशा छाडेछन् । उनले पूजारीको काम किन छाडे, त्यो थाहा भएन। उनको स्थानमा अर्का नयाँ पूजारीको आगमन भएको रहेछ । सोही मन्दिरका उही पुराना पूजारीलाई भेटन मन लाग्यो ।
उनको घर जाँदै थिए । त्यहाँ उनको पुरानो घर थिएन । नयाँ र अग्लो पक्की घर बनिसकेको रहेछ । हाम्रा पुराना पूजारीको घर देखिनँ । लाग्यो सायद उनी यहाँ टिक्न सकेनन् । लाग्यो घर बेचेर अन्तै लागेछन् । केही बेर यही सोच्दै थिएँ । कतैबाट आवाज आयो, ‘ए भाइ !’ म फरक्क फर्किएँ । उही पुराना पूजारी रहेछन् । त्यही अग्लो घरको बाल्कोनीमा बसेका रहेछन् । एक प्रकारले खुशी पनि लाग्यो । तर पुनः सम्झिएँ, त्यही मन्दिरको अगाडि छाकको जोहो गर्न माग्न बस्नेहरुलाई । केही अन्न खान नपाएर मरिसके अनि केही आज पनि त्यही मन्दिर अगाडि कसैले केही देला भन्ने आशामा माग्न बसिरहेछन् । तर हाम्रा पूजारीहरूको जीवनस्तर यसरी बदलिसकेको रहेछ । ‘यो मेरो घर हो नि’, उनले बताए । गज्जब लाग्यो मलाई । भेटी र दक्षिणा आर्जन गरेर उनले मन्दिर छेकिने गरी आलिशान महल ठड्याए । अनि मन्दिरको मूल ढोका नजिकै चिसो भुइँमा सहयोगको याचना गर्ने दीन दुःखीहरू भाेक भाेकै नै! धर्म कमाउनका लागि हरेक दिन मन्दिर गएर मुर्तीमाथि दक्षिणा चढाएर आउने मैले मन्दिर अगाडि रहेका ती दुःखीलाई खासै वास्ता नै गरिनँ ।
हाम्रा पुजारी अब अमेरिका जाने रे ! छोराछोरीले उतै बोलाए रे ! हाम्रा पुजारीको मिहिनेतले आर्जेको सफलता प्रति अत्यन्तै खुशी छु। तर के हामीले मन्दिर अगाडिका ती दुखी हरु लाई न्याय गरेऔं त? भगवान त उनीहरुको खाली पेटमा पाे थिए कि! मुर्ति मा फलफुल र भेटि चढाउँदा के त्यो फलफुल र भेटि भगवानले प्राप्त गरे त? यसो सोचेँ, सायद ती दुखीहरूकाे पेट भर्न सकेकाे भए अनि बल्ल भगवानले भन्ने थिए कि, ” मनुष्य म खुशी भए, तथास्तु।”
(लेखक मनोज घिमिरे चितवनका पुराना संचारकर्मी हुन् र उनी अहिले चितवनको पहिलो रेडियो सिनर्जी एफ एममा कार्यरत छन् ।)